Inkundla Yabantu Archives - Bayede News
Uma uzijwayeza ukubingelela nawe uzobingelelwa. Uma uvamise ukubonga nokunconywa nakuwe kuzokwenziwa njalo.
Isifo sikashukela singabuye silawulwe ngendlela ophila ngayo, udinga ukuba uhlale uzivocavoca isikhathi esiningi okuzosiza ukwehlisa isisindo sakho.
Leli qembu laya ezingxoxweni zokwakha imikhandlu ngokubambisana ngezinhloso ezimbili, eyokuqala okungukuguqisa i-African National Congress (ANC) emikhandlwini eyizizinda zomnotho kuleli okungabalwa kuwo iTshwane, eThekwini, iJohannesburg, eKurhuleni naseNelson Mandela Bay.
Kumasipala waseWestern Cape iBeaufort West i-ANC ithole amavoti angama-28.31%, i-DA yathola angama-27.11%, iPA yathola angama-21.93% kuqokwe uMnu uGaba wePA njengeMeya. Isivumelwano se-ANC nePA sihlomulise iPA ngeziMeya eziyisithupha nabaphathi bamahhovisi okuthuthukiswa kwengqala sizitha abali-10.
Inkatha Freedom Party ngomlomo kaMengameli wayo ubaba uHlabisa, iphumele obala ngeledlule ithi ngeke ihlangane ne-African…...
Enhla nasezansi ezweni lonke ngithi kangiphawule nami nganazi izihloko ezithe zaba sematheni kulezinsuku nokusivezele okuthile…...
Oshicilelweni lwelaboHlanga lwamhla zingamashumi amabili nesishiyagalolunye kuMfumfu kungihlabe umxhwele ukuvuma koMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu kweleNdlovukazi uMthaniya…...
Izizwe zaboHlanga kanye nezimilo zabo zaziphila ngokudla imvelo nokuvikelwa kwayo, kepha ukuphatha komhlaba bewuphathwa ngobuzwe.…...
Izinkinga zamaqembu nokwehla kwevoti lawo
Owayeyilungu lePhalamende leqembu i-Inkatha Freedom Party uGavin Woods wake wabhala umbiko ngaleli qembu owawuqukethe izingqinamba…...
Ake sikhuthaze izingane nentsha yakithi ngokubonga
Iningi lingakuphika noma likuvume, kuneqiniso elibabisa okwenyongo yenyathi elihlale lisobala okwenadinga yembuzi ukuthi imfundiso enkulu kunayo yonke zonke izingane ziyifunda ekhaya lapho zizalwa khona.
Elakuleli lidinga osopolitiki abafundisekile
Kusukela kwaphuma imiphumela ezinsukwini ezedlule, ezinkundleni zokuxhumana, abantu baveze ukujabulela abantu abasha abafundile abasezikhundleni
Asifinyelele ekujuleni kwengonyuluka ekhuthaza ukubonga
Ziningi izinto abantu abakhuthazana ngazo ukuqinisekisa ukuthi kuyenzeka kuphinde kufezeke abakuhlosile.
Amazwi okubonga abavoti ngokwethemba iqembu i-Inkatha Yenkululeko
Nina njengabavoti eNingizimu Afrika seniyidlalile indima yenu ngokuba nivote nigunyaze iqembu i-Inkatha Yenkululeko ukuba liniphathele imikhandlu yomasipala, manje sekuyithuba leqembu i-Inkatha Yenkululeko ukuba lenze njengoba ithembisile.
IDA izoba nohulumeni ovulelekile kuMasipala uMngeni
Umonakalo oshiywe abebekade bebusa lo Mkhandlu mkhulu, lesi isikhathi sokulungisa. Sizosebenza imini nobusuku ukuqinisekisa ukuthi sibuyisela izinto esimweni ukuze umkhandlu ukwazi ukwethulela abantu izidingo.
Ubumqoka bokucwaninga ngemishanguzo
Yize ulwazi olusha lulokhu luqhamuka ngocwaningo kuzolokhu kunezikhala okudinga ukuba kubhekwane nazo yingakho kunesidingo esiqhubekayo ukuthuthukisa okwenzeka manje nokuthola okungcono, okulula, okuphephile nokungumthelela ekwelapheni izifo ezikhona nezingaqubuka.
Kumele sikhuthaze usozigameko wokubonga nsukuzonke!
“Ngiyakholewa ekutheni umusa uyimpendulo eqondile yokubonga. Ngenkathi uqhubeka nokubonga umusa uyaqhamuka. Izibusiso zihamba emzileni wokubonga.…...
Izwe lingene labhajwa kunoxhaka omdala wabathumbi bezizwe
Ngithi nami ake ngisike elijikayo mayelana nezigameko esizibona zenzeka kuleli lizwe kuleli sonto lokwandulela ukhetho…...
Kungani ivoti laboHlanga liyisibunge kodwa izwi labo liyiqaqa
Labo baholi balibangisa ezikhungweni zokuvota behambela phezulu bezishaya isifuba ngoba basuke benesiqiniseko sokuthi bazodla umhlanganiso.
Sekulele ezakhamuzini ngokuzokwenzeka eSudan
Uma kukhona abaholi bamazwe ehlukene nalabo bezinhlaka ezifana ne-African Union (AU), i-European Union (EU), kanye…...
Ingozi yomhawu ophendule amaqhawe aba ngabakhapheli
Umona nomhawu kungazwakala kuyibizo elihlonza izehlakalo ezifanayo. Kepha uma ungabuka izehlakalo kanye nomonakalo okwenzeka phansi…...
Bekuhlangene aBambo kukhunjulwa iNkosi uThami Mkhize waseMfeni
Ngempelasonto yezi 24 kuMandulo bekufinywa ngeNdololwane kwaMkhize eMfeni eSigodlweni seNkosi uMlulama kaSiyingela njengoba isizukulwane saBambo…...
Sekuphele izinyanga ezithi azibe yisi-5 kwaqubuka imibhikisho Eswatini nokucacile ukuthi, uma kungathathwa izinyathelo ezinqala zokuthola…...
Kuncane kubo! Kukhulu abakwenza mihla nemihla kithina
Siqhubeka nokwazisa ababe nomnikelo onzulu empilweni yethu njengengxenye yesibili yokugcizelela ubumqoka bokubonga, ngaphansi komkhuba esiwukhuthazayo…...
Ukuzilolonga kukhombise ukukhiqiza iserothini ekwenza uzizwe uthakasile nedopamine ekwenza uzizwe ugqugquzelekile, wakekelile, ugxilile futhi ujabulile.
IDemocratic Alliance isilimbile iqanda lenjelwane yazininda
#UMsombulukoWesinqumo: Abe-ABC bathi amakhono nengqalasizinda yinhliziyo yentuthuko